Indlu enomtsalane kwi-Bay
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLaTayna
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uLaTayna iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Obu buhle benziwe ngobuhle bumalunga nendawo, indawo, indawo. Yimbono yolwandle enefenitshala ngokupheleleyo 865 sq. ft. 2 amagumbi okulala/2 amagumbi okuhlambela asekhaya aneembono ezintle ze-bay kunye nechweba kwindawo yokuhlala eyodwa ethe cwaka e-Corozal-Bay Shore Drive. Ibhayi ziinyawo ezingama-250 kuphela ukusuka kwikhaya ukufikelela ekuqubheni. Ukuphola kwempepho enkulu yeCaribbean ekhaya. Vuka kwaye ujoje impepho epholileyo yolwandle kwaye uhambe uye kwezinye zezona ndawo zokutyela zibalaseleyo kunye neevenkile ezithengisa ukutya edolophini.
Eli gumbi lokulala ligcwele ngokupheleleyo linendawo yokulala yokumkanikazi enye kwigumbi ngalinye elinamagumbi okulala amabini anegumbi lokuhlambela eline-ensuite ngeengcango zesitayile sesalon. Ixhotyiswe nge-air conditioner ebekwe kwigumbi lokuhlala kunye namagumbi okulala kunye nabalandeli besilingi aba-6 kulo lonke.
~Ipropathi inekhitshi enezixhobo ezisanda kuthengwa ezipheleleyo kunye nayo yonke into efunekayo kwiimfuno zakho zokupheka kubandakanya imicrowave, umenzi wekofu, iketile yeti, itoaster, iblender, iimbiza neepani, izitya, iglassware, izixhobo.
~Kukho umabonakude wescreen esisicaba esineFirestick kwigumbi lokuhlala kunye nenkqubo ye-IPTV ebonelelweyo okanye wonwabele ezakho iinkonzo ezinje ngeNetflix okanye iHulu. Ineenkonzo ezilungileyo kakhulu ze-intanethi.
~Kukho iveranda yabucala enetafile kunye nezitulo ukonwabela isiselo osithandayo okanye ishwamshwam. Kukho i-bbq grill ekwabelwana ngayo kwipropathi.
~Ikhaya yindawo yangaphakathi engenamsi. Simema iindwendwe zethu ezitshayayo ukuba zithathe ithuba leendawo ezivulekileyo ezikufutshane ezijikeleze amabala okanye kwiveranda ye-condo. Ukuba le polisi yaphulwa, uya kuphulukana nediphozithi yakho.
43" HDTV ene-I-Fire TV
Lo bumelwane bubuhle, buyindawo yokuhlala yodwa ezolileyo yokujonga amanzi nokufikelela elwandle kwiCorozal bay kunye nedolophu yaseCorozal. Yimizuzu nje ukusuka kokunye kwezona ndawo zintle zokutyela eCorozal ezibandakanya iCorozo Blue's, El Cielo, iKitchen kaJuni, kunye neAl's Cafe. Kumgama wokuhamba ukuya kwivenkile yevenkile enye kunye nesikhululo segesi. Abamelwane babonwa behamba-hamba bejikeleza kwindawo kwaye benandipha ukuba kunye nabanye. Le ndawo isembindini kwaye ifuna ukusetyenziswa kancinci kwesithuthi kwaye ikufuphi nendawo yokubona indawo.
Umbuki zindwendwe ngu- LaTayna
I am a Belizean property manager who works with my husband exclusively in Corozal, Belize offering short term, long term and vacation getaways at safe, secure and relaxing waterfront and seaside view properties. Let me check Belize off of your bucket list destinations. We would truly love to make our properties your home away from home and your Caribbean dreams a reality.
I am a Belizean property manager who works with my husband exclusively in Corozal, Belize offering short term, long term and vacation getaways at safe, secure and relaxing waterfro…
Zonke iindwendwe eziqinisekisiweyo zinokunditsalela ku-Airbnb, kuWhatsApp okanye ngemiyalezo ukuba unayo nayiphi na ingxaki okanye izinto ezikuxhalabisayo ngexesha lokuhlala kwakho. Sikwakhona ukukunceda ngokucwangcisa ukuhlala kwakho kwiholide okanye ukuhamba.
Zonke iindwendwe eziqinisekisiweyo zinokunditsalela ku-Airbnb, kuWhatsApp okanye ngemiyalezo ukuba unayo nayiphi na ingxaki okanye izinto ezikuxhalabisayo ngexesha lokuhlala kwakho…